Warbaahinta Mareykanka oo Billaabay iney soo bandhigaan Siraha Farmaajo. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Warbaahinta Mareykanka oo Billaabay iney soo bandhigaan Siraha Farmaajo.
Last updated May 2, 2021 562 0
Madaxweyne Farmaajo ayaa 1-dii August 2019 ka tanaasulsay muwaadannimadiisa Mareykanka, isaga oo aan shaacin wax sabab ah, hase yeeshee wargeyska ayaa wrbixin uu maanta qoray ku sheegay in baaritaan lagu ogaaday inuu Farmaajo horey u qaatay baasaboorka dalka Canada.
Baaritaankan oo ay sameysay Waaxda Dakhli Uruurinta Mareykanka ee (IRS) ayaa saxaafadda dalkaas ku dhaliyay iney Farmaajo su’aalo ka weydiiyaan balse waa uu ka gaabsaday.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in Farmaajo uu Mareykanka tagay sannadkii 1985-kii isaga oo ah diblomaasi curdun ah oo ka shaqeynayay safaaraddii Soomaaliya balse markii ay burburtay dowladdii Siyaad barre uu go’aansaday inuu qaxooti ku noqdo dalkaas.
Qof saaxiib la ah qoyskiisa oo uu wargeysku soo xiganayo ayaa sheegay inuu marka hore magan-galyo ka codsaday Canada oo ay ku noolaayeen hooyadiis iyo walaalhiis, wuxuuna kadib qaatay baasaboorka Canada.
Farmaajo wuxuu yaraantiisii wadashaqeyn la lahaa safaaraddii Mareykanka ee Soomaaliya oo Muqdisho ku tiilay waxaana ilo kale ay sheegayaan iney iyaga dhoofiyeen.
Illaa iyo hadda ma jiro diiwaan shaacsan oo muujinaya in Farmaajo uu ka tanaasulay baasaboorka dalka Canada.
Warbixinta ayaa intaas ku dartay in Farmaajo uu muddo ku noolaa Canada kuna soo fashilmay nolosheeda taasina ay ku kalliftay inuu sagaashamaadkii usoo guuro Mareykanka, uuna dego magaalada Buffalo.
Warbixinta ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday dhacdo ku saabsan nolosha Farmaajo oo ka dhacday magaaladaas oo dhacda gobolka New York, taasoo tusaale u noqon karta habdhaqankiisa kursi jacaylnimada ah.
Xubno ka mid ah Soomaalida Mareykanka, oo codsaday inaan magacyooda la shaacin ayaa intaas ku daray in murankaas uu horseeday in jaaliyadda ay u kala jabot laba garab.
Sheekada ku saabsan arrintan Jaaliyadda ayaa horey marar badan waxaa loogu soo qoray baraha bulshada, hase yeeshee warbixinta jariidadan ayaa ah markii ugu horreysay oo ay warbaahin Ameerikaan ah shaaciso.
Marka ay sidaa leeyihiin waxay muujinayaan in Farmaajo dabeecaddiisu ahayd kursi jacaylka. Warbixintan ayaa muujineysa in dowladda Mareykanku aaney sidii horey ugu heellaneyn Farmaajo maxaa yeelay warbaahinta dalkaas oo aad u buunbuunin jiray ayaa maanta sirihiisa bannaanka soo dhigaya.
Markii uu Farmaajo iska dhiibayay Baasaboorka Mareykanka wuxuu dadka shacabka ah u muujinayay inuu yahay nin ka tanasulay dhalashada dalkaas oo Soomaalinimada usoo go’ay balse waxaa u qarsoonaa baasaboorka Canada.
Dhageyso Warbaahinta Mareykanka oo Billaabay iney soo bandhigaan Siraha Farmaajo.
Wararka ka imaanaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa ku waramaya in qarax xoogan lagu weeraray…